ကလေးတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆော့ကစားခွင့်ပေးဖို့ ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ?
Home Child Entertainment ကလေးတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆော့ကစားခွင့်ပေးဖို့ ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ?
ကလေးတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆော့ကစားခွင့်ပေးဖို့ ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ?
ကလေးတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆေ့ာကစားခွင့်ပေးခြင်းက ကလေးတွေရဲ့ဖွံဖြိုးမှုအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အရာရာကိုထိန်းချုပ်ခံထားရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့က လေးတွေကို ဘာကြောင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆော့ကစားခွင့်ပေးဖို့လိုတာလဲဆိုတာ အောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်
ဆော့ကစားခြင်းဟာ ကလေးတွေအတွက် သင်ယူမှုနဲ့ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် တကယ်အရေးပါပါတယ်။ သင့်ကလေးကစားခြင်းကနေ သူ့အတွက်သင်ယူဖို့နည်းလမ်းများစွာကိုပေးပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။
သင့်ကလေးကို ကူညီပြီး ဆော့ကစားပေးခြင်းက ကလေးအတွက် ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှု၊ ချစ်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ လုံခြုံခြင်း၊ လူမှုရေးစွမ်းရည်၊ အခြားသူတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်ခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ဖွံဖြိုးမှုစတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေရနိုင်ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမရှိတဲ့ အခမဲ့ကစားနည်းတွေဟာ ကလေးငယ်များအတွက် အကောင်းဆုံးကစားနည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက သင့်ကလေးအားသူရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးပြီးသူ့ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ရွေ့လျားစေနိုင်ပါတယ်။
တစ် ဦး တည်းသို့မဟုတ်အနုပညာသို့မဟုတ်ဂီတဂိမ်းများအပါအဝင်အခြားသူများနှင့်အတူဖန်တီးမှုကစားနည်း
စိတ်ကူးယဉ်ကစားနည်းများ – ဥပမာအားဖြင့်သေတ္တာများသို့မဟုတ်စောင်များဖြင့်အိမ်ငယ်အိမ်များဆောက်လုပ်ခြင်း၊
အသစ်များသို့မဟုတ်အကြိုက်ဆုံးကစားကွင်းများ၊ ဗီရိုများ၊ အိမ်နောက်ဖေး ပန်းခြံများစတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေက သူလွတ်လွတ်လပ်လပ် ကြိုက်သလိုကစားလို့ရတဲ့ကစားနည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကန့်သတ်မှုမှမရှိဘူးပေါ့။
ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကစားနည်းတွေကတော့ ပိုမိုစနစ်ကျပြီးသတ်မှတ်ထားသောအချိန်၌ဖြစ်စေ အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးကဖြစ်စေ ဦးဆောင်ကစားတဲ့နည်းမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Cricket Blast၊ Aussie Hoops ဘတ်စကက်ဘော၊ NetSetGO netball၊ Come and Try Rugby နှင့် Auskick ဘောလုံးစသည့်ကလေးငယ်များအတွက်အားကစားနည်းများစတာတွေက စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကစားခြင်းကင်းမဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်ကစားခြင်းကိုစိတ်မ ၀ င်စားခြင်းတို့သည်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပညာရှင်သို့မဟုတ်သင့်ကလေး၏ပညာပေးသူနှင့်စကားပြောရန်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။
သင့်ကလေးငယ်သည်ကစားစရာများကိုကျဉ်းမြောင်းစွာစိတ်ဝင်စားသည်၊ သို့မဟုတ်ကစားစရာများကိုအသုံးဝင်သောနည်းလမ်းနဲ့ မသုံးတတ်တာမျိုး အခြားကလေးများနဲ့ ကစားခြင်းကို စိတ်မဝင်စားဘူး သို့မဟုတ် ဆော့ရမှာကို စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင် ပြဿနာတစ်ခုခုတော့ရှိနေပါပြီ။ ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ပြကြည့်ပါ။ကဲ..ဒီတော့ ကလေးတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆော့ကစားခွင့်ပေးခြင်းက ညဏ်ရည်ကိုကောင်းမွန်စေသလို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာစေတဲ့အတွက် မချုပ်ခြယ်ကြနဲ့တော့နော်မေမေတို့..
Previous articleသင်ဟာ မိဘကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာ (၇)ခု
Next articleသင်သိထားသင့်တဲ့ မိဿရာသီဖွား( မတ်လ ၂၁- ဧပြီလ ၁၉) ကလေးငယ်တွေအကြောင်း (၉)ချက်